Xellence ngu X nguKygo, ne-ANC kanye nomsindo omangazayo | Izindaba zamagajethi
X nguKygo iyaqhubeka nokukhula ngokwebanga lomkhiqizo wayo, lapha ku-Actualidad Gadget sihlaziye amanye ama-headphone abo, amaningi awo ngokukhanselwa komsindo okusebenzayo, ukusebenza okufiswa kakhulu okuthandwa kakhulu muva nje. Ngalesi sikhathi u-X nguKygo ubefuna ukudlulela phambili.
IXellence ngamahedifoni amasha we-Active Noise Canceling (ANC) TWS akhishwe yi-X nguKygo. Thola nathi lawa mahedfoni anezici eziningi, ukuthola ukuthi ngabe u-X nguKygo uyaqhubeka yini nokubheja ikhwalithi nomsindo owenzelwe wena ukwanelisa abathengi abafuna kakhulu.
Njengakwezinye izikhathi, sincoma ukuthi ubheke ividiyo ebeka umqhele kule ndatshana, ngaleyo ndlela uzokwazi ukubona ukungabikho kwebhokisi gcwalisa amahedfoni futhi ufunde kabanzi ngokuqukethwe ibhokisi. Kulokhu siphinde sikushiye incwajana encane yokumisa ngohlelo.
Uma uthatha ithuba bhalisa bese usishiya like uzosiza umphakathi we-Actualidad Gadget ukuthi uqhubeke ukhula futhi ngaleyo ndlela sizokulethela ukuhlaziywa okuhle, njengenjwayelo.
1 Idizayini: Lapho i-X nguKygo ifuna ukuzibeka engcupheni
3 Ukukhanselwa kohlelo lokusebenza nomsindo
4 Ikhwalithi yomsindo nesipiliyoni somhleli
Idizayini: Lapho i-X nguKygo ifuna ukuzibeka engcupheni
Imikhiqizo ye-X nguKygo ijwayele ukusuka kude nokuhlangana, futhi kule headphone ye-True Wireless (TWS) bekungeke kube kuncane. Yize bengasikhumbuza kalula ngeSurface Buds yeMicrosoft, iqiniso ukuthi banombono ophambene ngokuphelele nalabo okushiwo ngaphambili. Sithola ama-headphone avelele futhi ayindilinga ngaphandle.
Nokho, bangamahedlebe, yalabo abafakwa endlebeni. Ukuzwa kokuqala kuyamangaza, uzothola kunzima ukukholelwa ukuthi awehli kalula. Kodwa-ke, bahambele umugqa wesisindo ongaguquguquki namaphakethe amahle.
Isisindo sehedfoni: ama-63 amagremu
Imibala: emnyama nokumhlophe
Lawa ma-pads, ahluke kancane kulawo esivame ukuwabona, ayabasiza ukuthi bangahambi ngisho nakancane kunoma yisiphi isimo. Ngakolunye uhlangothi, ukuZiphethe ukuhlanganiswa komsindo okungahlukumezi uma kubhekwa ukuthi ngamahedifoni ane-ANC (ukukhanselwa komsindo okusebenzayo).
Kuloluhlaka lwemininingwane sithola ibhokisi lesitayela se-trunk, elinokuvulwa okuphezulu kepha lincane ngokumangazayo. Icwecwe kakhulu kunecala le-Huawei FreeBuds 3 futhi likhulu nje kancane kune-Apple's AirPods V2. Kufanele kushiwo ukuthi ikhokhisa nge-USB-C nokuthi cSinezisetshenziswa ezingafika ku-10 zamapayipi zokuvumelanisa umkhiqizo nezidingo zethu.
Ake siqale ngesiphetho, into u-X nguKygo angavamisile ukungena kuyo nemikhiqizo yayo. Sinabashayeli ababili abangu-10 mm abane-32 Ohm impudence nemvamisa yokuphendula phakathi kuka-20Hz no-20 KHz ngokuzwela okungu-97 db.
Sine I-Bluetooth 5.0 yokuxhumana nokuhambisana namaphrofayili adinga kakhulu i-A2DP, i-AVRCP, i-HSP, i-HPF kanye nokuhambisana nomsindo I-Apple (AAC) Futhi umsindo I-Qualcomm Hi-Fi, i-aptX. Abazange bafune ukuthi kuswele lutho.
Ngokuqondene nebhokisi sinefayela le- Ibhethri le-750 mAh, i-85 mAh ye-earbud ngayinye ngawe. Lokho kusinikeza amahora angama-30 okuzimela ancishiswe ngokusobala uma sisebenzisa i-ANC (kuze kufike emahoreni angama-20 ezivivinyweni zethu). Ukukhokhiswa ngokugcwele kusithathe cishe amahora amabili.
Kodwa-ke, inenkokhiso esheshayo yemizuzu engu-15 ezosinika amahora angama-2 ngaphezulu wokudlala. Akufanele sikhohlwe ukuthi sinokumelana ne-IPX 5 emanzini nezithukuthuku, ngakho-ke ngeke sibe nankinga uma sifuna ukuwasebenzisa ngenkathi sivivinya umzimba, ezivivinyweni zethu bezinethezekile futhi zivikela kakhulu.
Ukukhanselwa kohlelo lokusebenza nomsindo
Siqala ngokukhanselwa komsindo okusebenzayo, lokhu kunokusebenza kwaso kumahedfoni ukuthi kuzosivumela ukuthi sikhansele wonke umsindo wangaphandle noma kusebenze i- «Ambient Mode», lokho kuzosihlukanisa nezingxoxo noma imisindo ephindaphindeka kakhulu, ekahle uma sihamba ngomgwaqo ukusinika ukuphepha okwengeziwe.
Ekuvivinyweni kwami ​​ngithole kanjalo enye yezindlebe ezisebenza kahle kakhulu ze-TWS nge-ANC engake ngazama, ngokuba ukukhanselwa komsindo kungokoqobo, kusebenza ngempumelelo nekhwalithi.
Sinegama lomsindo we-Mimi kusuka ku-X nguKygo, Ukusiqondisa ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza kuzosivumela ukuthi siphendule uchungechunge lwemibuzo nokuhlolwa komsindo ukuze amahedfoni alondoloze iphrofayili yomsindo eyanelisa izidingo zethu zomculo. Kuyabonakala kancane, njengokusebenza kwe- isithuthukisi se-bass.
Ngokwengxenye esinayo imibhobho eyakhelwe ngaphakathi lapho ekuhlolweni iphendule kahle kakhulu ezingxoxweni zocingo, futhi ngenkathi ucela uSiri ngokulawulwa kokuthinta kwedivayisi. Siphinde sibe nezinzwa zokusondela ukubona lapho sibasusa bese simisa umculo (noma sikubeka futhi).
Ikhwalithi yomsindo nesipiliyoni somhleli
Ngokuya ngekhwalithi yomsindo, njengoba kwenzekile nge-X yangaphambilini ngemikhiqizo yakwaKygo, sizithola sinomkhiqizo oshunwe kahle kakhulu. Ukulalela amaqembu afuna ngenkani analolu hlobo lwamahedfoni afana ne-Artic Monkeys noma i-Queen, kusivumele ukuthi sijabulele wonke amabanga nezinsimbi zomculo.
Isikhathi esisodwa futhi X nguKygo isivumela ukuthi sijabulele zonke izinhlobo zomculo ngenxa yamandla wokwenza ngokwezifiso futhi yethula umkhiqizo womsindo osezingeni eliphakeme.
Ngakolunye uhlangothi, isicelo siyindawo ethophayo impela, esivumela ukuthi sizwe ukuthi sinomkhiqizo ofana nentengo yawo nokuthi singenza ngendlela oyithandayo. Ukukhanselwa komsindo okusebenzayo kuveza ngqo lokho okuthembisayo futhi imiphumela yethu yokuhlolwa ibe mihle kakhulu. ngokulingana namahedfoni afana ne-AirPods Pro.
Umzuzu wentengo ufika, ama-euro angama-199 kulawa mahedfoni ngokusobala ayabiza, kepha enzelwe umsebenzisi mhlawumbe afune ukwedlula ukuthengisa ngokuqinile. Ungazithenga okwamanje kuphela kuwebhusayithi yayo esemthethweni (isixhumanisi) kumhlophe noma kumnyama.
Izinto ezisezingeni eliphakeme kanye nedizayini enesibindi
Isicelo esihle sokwenza ngokwezifiso nokuzimela okukhulu
Ezinye izindlela ezisebenzayo zokukhansela umsindo
Umsindo ungekhwalithi ephezulu
Iphuzu elilodwa ngaphezulu levolumu alikho
Ukuzimela kuhlupheka kakhulu ne-ANC esebenzayo
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Xellence ngu X nguKygo, nge-ANC nomsindo omangalisayo
Landa omagazini mahhala: amawebhusayithi ama-3 ahamba phambili ngeSpanish
Ungawulanda kanjani umculo wekhwalithi ephezulu we-FLAC mahhala